နေရောင်ခြည်သည် ကျန်းမာရေးအတွက် လိုအပ်ပါသည်။ သို့သော် လွန်ကဲစွာ နေရောင်ခြည်နှင့် ထိတွေ့ခြင်းသည် အရေပြား အိုမင်း ရင့်ရော်မှုကို မြန်စေပြီး အရေပြားကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေ ပိုမိုများစေပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ မည်သည့် အသားအရေ အမျိုးအစားမဆို ထိရောက်စွာ နေရောင်ခြည်ဒဏ် ကာကွယ်ဖို့ လိုအပ်ပါသည်။
မွေးကင်းစများ၊ ကလေးသူငယ်များနှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရထားသော အသားအရေ သို့မဟုတ် ထိခိုက်လွယ်သော အလက်ဂျစ် အသားအရေတို့သည် SPF မြင့်မားသော နေရောင်ခြည် ကာကွယ်ပေးသည့် သက်ဆိုင်ရာ sunscreens တို့ကို လိုအပ်ပါသည်။
အရေပြားနှင့်နေရောင်ခြည် ဆိုင်ရာဆောင်းပါးများနှင့် အကြံပေးချက်များ
အရေပြားကို မထိခိုက်စေပဲ နေရောင်ခြည်ကို ဘယ်လိုခံစားရမလဲ?
နေရောင်ခြည်မှာ ကောင်းကျိုးများစွာရှိသလို အရေပြားကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်စေနိုင်ပြီး ရေရှည်အတွက်လည်း ဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်။ သင့်အရေပြားပေါ်မူတည်ပြီး ဘယ်လို နေရောင်ကာကွယ်မှု ရွေးရမလဲ? ကျွန်တော့်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်က သင့်အသက်အရွယ်ပေါ် မူတည်ပြီး UV ရောင်ခြည်တွေရန်က ကာကွယ်နိုင်အောင် ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
တုံ့ပြန်ထိခိုက်လွယ်သော အရေပြားအတွက် အကောင်းဆုံး နေရောင်ကာကွယ်နည်း
အင်တာနက်အသုံးပြုသူတစ်ဦး - ကလေးငယ်များအတွက် အကောင်းဆုံး နေရောင်ကာလိမ်းဆေး ကိန်းညွှန်းက ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ?
၁၈လအရွယ်အထိ သင့်ကလေးအား နေရောင်ထဲမထွက်မိစေရန် အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။ သို့သော် မဖြစ်နိုင်ပါက လုံလောက်သော ကာကွယ်မှုပေးမည့် SPF 50+ ပါဝင်သော ပစ္စည်းကို သင်အသုံးပြု သင့်သည်။ အသက်(၃) နှစ်အရွယ်ထိ ဓာတုအခြေခံပါဝင်သော နေရောင်ကာလိမ်းဆေး မသုံးသင့်ပဲ တွင်းထွက်ပစ္စည်းများ ပါဝင်အောင် အခြေခံထားသော နေရောင်ကာလိမ်းဆေးကို အသုံးပြုသင့်သည်။
နေရောင်ထိနေသော တုံပြန် ထိခိုက်လွယ်အသားအရေ
ကလေးများအတွက် အကောင်းဆုံး နေရောင်ကာ ပစ္စည်းလား? နေရောင်ခြည် ကာကွယ်နိုင်မှု အမြင့်ဆုံးလား? သင့်အသားအရေနဲ့ အသင့်တော်ဆုံးလား? သင်ဘာကို ရှာဖွေနေပါသလဲ?
BIODERMA ၏ အဖြေ: အသားအရေအားလုံးအတွက် Photoderm ထုတ်ကုန်များကို နေရောင်ခြည်ကြောင့် တုံပြန်မှုမဖြစ်အောင်၊ ဓာတုပစ္စည်းများကြောင့် တုံပြန်မှုမဖြစ်အောင်၊ တုံ့ပြန်ထိခိုက်လွယ်သော အရေပြားကလေးများ၊ အဆီပြန်ဝက်ခြံဖြစ်လွယ်သော အရေပြား၊ ခြောက်သွေ့သောအရေပြား၊ အမဲစက်များဖြစ်လွယ်သည့် အရေပြားများ အတွက် နေရောင်ကာ ထုတ်ကုန်များကို ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။